Natiijooyinka Bakhtiyaa-nasiibka, Jackpots iyo Nambarada | Lottery.com
Bakhtiyaa nasiibka taleefankaaga!
Raac tigidhadaada, hel digniinta markaad guulaysato, oo aad socod ku cayaareyso. Faahfaahin intaa ka badan kala soco barnaamijka.
CIYAAR IMIKA or
ama waxbadan ka baro barnaamijkeena
ilaa isku aadka xiga
Dooro Ciyaar aad Ugu Jeceshahay
Waxaad ku ciyaari kartaa Powerball, Malaayiin Mega, iyo inbadan oo ah gobolada aan ku nool nahay! Waxaad sidoo kale heli kartaa lambarada guuleysta, taariikha sawiro, iyo isugeynta jaakadaha boqollaal ka mid ah ciyaaraha kale ee bakhtiyaa-nasiibka.
Xulo Lambarkaaga Nasiibka Leh
Ciyaar lambaradaada nasiibka ah ama si dhaqso leh u qaado labo kab oo kaliya. Taabo, Taabo, Tigidha!
Soo iibso illaa 50 tigidh markiiba. Wax kasta oo halkaas ka jira ayaan wax ka qaban doonnaa annana waan kula soo socodsiin doonnaa markaad guulaysato!
Ururi DHAMMAAN guulahaaga
Waad ilaalinaysaa 100% guulihii aad gaadhay! Ku guuleysigaagu wuxuu kusii nagaan doonaa isku-dheellitirkaaga si aad u ciyaari kartid tikidyo badan ama aad weydiisan kartid casread. Haddii aad nasiib u leedahay inaad ku garaacdo jaakadaha weyn, waan kula soo xiriiri doonnaa oo aan kaa caawin doonnaa hawsha furashada.
Diyaar ma u tahay inaad Bilaabato Ciyaarta?
Ka soo degso barnaamijka 'Lottery.com' ee ku yaal App Store ama Google Play Store. Samee koontadaada si aad ugu bilowdid daqiiqado gudahood!
Hab wanaagsan oo lagu ciyaaro Bakhtiyaa-nasiibka
Dhamaan Ciyaaraha Aad Jeceshahay
Haddii aad ku sugan tahay mid ka mid ah gobolladayaga LIVE waxaad ku ciyaari kartaa awoodda dhabta ah ee Kubadda Koleyga iyo Mega Milyan oo qalabka tooska ah adigoo adeegsanaya barnaamijka 'Lottery.com'.
Isticmaal Ammaan ah
Lottery.com waxay xaqiijisaa amniga iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyada horseedda warshadaha ee xaqiijinaya aqoonsigaaga, da'daada, iyo goobtaada si aad u siiso khibradaha bakhtiyaa nasiibka ugu wanaagsan uguna amniga badan.
Fudud Cas Cas
Ku guuleysto dhammaan guulahaaga inay si sax ah ugu diraan koontadaada bangiga, aamin iyo aamin ah, markaad guuleysato! Waad ilaalinaysaa boqolkiiba 100 guuleysashadaada!
Reviews The Ma In
Waxaan isticmaalay barnaamijkan dhowr bilood oo aan u tixgeliyaa mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee baarista bakhtiyaa-nasiibka ah ee halkaa ka jira. "
Adeeggooda macmiilku waa mid aad u cajiib ah. Wax kastoo aan weydiisto, si dhakhso leh ayay iigu jawaabaan wax walba si cad ayay ii sharxaan. Aad baad u mahadsan tihiin.
Macluumaadka ku saabsan Ciyaar mas'uul ah iyo khamaarka dhibaatada ayaa la heli karaa. Ama wac 1-800-522-4700.
Hel Barnaamijka Bakhtiyaa-nasiibka ah
Weydiimaha Ururka Bakhtiyaa-nasiibka
Natiijooyinka Bakhtiyaa-nasiibka ee Gobolka
Siyaasadda Khamaarka Mas'uulka ah